Madaxweyne Ku Xigeenkii Hore Oo Difaacay Gudiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Ee SONSAF | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweyne Ku Xigeenkii Hore Oo Difaacay Gudiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Ee SONSAF
Hargaysa (SDWO.com): Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa markii u horaysay waxa uu ka hadlay gudiga sharcinimadoodda muranku k taagan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo ay dhawaan samaysay daladda ururadda aan dawliga ahayn ee SONSAF.
Axmed Yuusuf Yaasiin, oo xubin ka ah gudigaasi waxa uu difaacay sharciyadeed, oo uu tilmaamay in aanay u jeedadda loo sameeyay gudigaasi ay tahay oo keliya in ay ka tallo bixiyaan haddiiba ay khilaafyo ka dhashaan doorashooyinka.
Waxaanu sheegay in gudidaasi ay tahay mid samaynteedda loo raacay shuruucda dalka, isla markaana in la abuuro wax diidayaa aanu jirin. Isagoo hadalkii komishanka doorashooyinka ku tilmaamay mid aanay u meel deyin, isla markaana aanan waafaqsanayn sharciyadda dalka.
Madaxweyne ku xigeenkii hore oo maanta magaaladda Hargaysa ugu waramayay Star TV, waxa kale oo uu intaasi ku daray in aanay sharci darro ku imanin gudidan oo ay dhawaan ka biyo diideen kimishanka doorashooyinku, isla markaana ku tilmaameen in ururka SONSAF uu ku xad gudbay shuruucdii wadanka.
Axmed Yuusud Yaasiin, oo sharaxaad ka bixinayay hawlaha shaqo ee la doonayo in ay gudigani ka shaqeeyaan, waxa uu yidhi “Anaga waxaa na loogu yeedhay, haddii ay dhacdo in marka waxani ay sharciga soo dhaafto, ama sharciga ka hor marka wax la isku soo jiidaayo, waa labaddaa qaybood uun.
Sharciga ka hor inta aan hay’adaha sharciga la is-la gelin ka hor in gudiyadii aynu ku soo caano-maalnay, ay isku soo jiidaan iyo kadib marka ay jaran-jaradda sharciga maraan haddii ay wax khilaafaad ahi yimaadaan, ayaa laga soo dhex xulay bulshadda rayidka ah guddidaasi anagoo ah 27 xubnood”.
Waxa kale oo uu jawaab ka bixiyay dhawaaqii ka soo yeedhay komishanka doorashooyinka ee ahaa in ay sharci darro yihiin gudidan uu xubinta ka yahay, oo ka kooban 27 xubnood oo ay ku jiraan shaqsiyaad magac weyn ugu dhex leh bulshadda Somaliland.
“Waa marka loo baahdo uun, ma aha xataa… waa marka ay wax khilaafaad ahi yimaadaan, arrinku waxa uu khuseeyaa waa bulshadda Somaliland oo mar walba heegan u ah in ay nabadgeliyadoodda ka shaqeeyaan.
Sidaas darteed haddii ay khilaafaadyo yimaadaan, waa in la hello guddi heegan ah oo markaana arrinta gacanta ku qabata. Laakiin, marka uu arrinku marayo jaran-jarooyinka sharciga, nin sharciga garanayaa soo geli maayo”ayuu yidhi Axmed Yuusuf Yaasiin.
Dhinaca kale madaxweyne ku xigeenkii xukuumadii Rayaale, waxa uu ka hadlay go’aankii uu madaxweyne Siilaanyo ku kala qaaday doorashooyinka iyo sidoo kale walaaca ay beesha caalamka gaar ahaana dawladaha iyo hay’adaha Somaliland doorashooyinka ka taageeraa kaga jawaabeen arrintaasi.
Waxaanu sheegay Axmed Yuusuf Yaasiin, in haddii ay qaadhaan bixiyeyaashu Somaliland ka joojiyaan lacagta ay kaga taageeraan doorashooyinka in Somaliland ay isku filnaan karto, isla markaana ay iyadoon wax caawimo ah helin keligeed qabsan karto doorashooyinka.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Caalamka ka maarmi mayno, oo wax baa inagaga xidhan, imikana caalamka waxaaba laga dhigay guri keliya. Laakiin Somaliland in ay isku tashato anigu waan qabaa, oo aanay arrimuhu korka inagaa iman, oo aan la odhan sidaas iyo sidaas sameeya, taas anigu ma qabo.
Somaliland arrimaha gudaheedda iyadaa og, qaabka ay wax u najaxayaana iyadaa og. Tan beesha caalamka, marka wax gacanta laguugu hayo, sida koonfurta Soomaaliya oo kale in aan ku dhacno ma jecli.
Caalamku wixii wadankeenna gudihiisa ah, waxba kama oga sida ay hagaagayaan, wadankeenna gudihiisa inagaa og, waana in beesha caalamku sidaas ku raaco”.